Gacha Star Apk Dhawunirodha Ye Android [Latest Game] - Luso Gamer
Gacha Star Apk Dhawunirodha Ye Android [Yazvino Mutambo]
Ivo vanogadzira vakatogadzira uye kuburitsa akawanda editions eGacha. Nekudaro nhasi mutambo watiri kutsigira pano wakagadziridzwa chete. Ikozvino kubatanidza iyi vhezheni nyowani yeGacha Star ichashamisa vateveri nemavara matsva uye maficha.
Gacha yatove yakakurumbira nekuda kweiyo yakasarudzika uye yepamusoro maficha. Kunyangwe ivo vanogadzira vanodyara akawanda mini-mitambo ine studio sarudzo mukati mevateveri. Kuti unakirwe nenguva yemahara uchitamba iyo mitambo uchishandisa inbuilt mavara. Uyezve, vatambi vanogona zvakare kunakidzwa nekutora chikamu mune zviroto hunhu.
Iyo yepamutemo vhezheni yeiyi edition nyowani haiwanikwe kune vatambi. Nekudaro, isu tiri kubudirira kuunza iyo inoshanda vhezheni yemutambo yevatambi. Saka imi vakomana makagadzirira kunakidzwa iyi nyowani yakagadziridzwa 2D Gameplay wobva waiisa mukati meandroid smartphone.
Chii chinonzi Gacha Star Apk
Gacha Star Android yakakamurwa pakati pemitambo yakajairika yepamhepo. Asi mutambo uyu haungotarise pane zvakajairika asi unogona kupawo iyi yepamusoro tsika dashboard. Izvo zvinobatsira vateveri kugadzirisa uye kubata zviwanikwa zvinoenderana.
Kana isu tichitarisa uye nekuona iyo yepamutemo vhezheni yemutambo. Takaiwana yakatsetseka uye yakapfuma muzviwanikwa zvepro seLive Customizer, Characters, Shirts, Hairstyles, Zvombo nezvimwe. Asi kana zvasvika pakusvikika kwakananga.
Ipapo vatambi vangangoda kutenga premium kunyoreswa uye rezinesi repro. Pasina kuisa mari chaiyo, zvinoita sekunge zvisingaite kuti vatambi vafarire izvo zviwanikwa zvepro. Asi ikozvino ese aya maficha anosanganisira edhita anowanikwa mukati meakagadziridzwa vhezheni.
Zvemahara pasina kunyoreswa kana kunyoreswa. Kunze kwekuwanikwa kwakananga, nyanzvi dzakavhurawo live customizer. Izvo zvinobatsira mukuvaka yavo yakarota anime hunhu munguva shoma pasina kutambisa zviwanikwa.
zita Gacha Star
zera 199.8 MB
Package Zita air.com.gacha.gachastar
chikamu Games - shaya hanya
Maitiro ekumisikidza uye mashandisirwo ekutamba application ari nyore kwazvo. Kutanga, vatambi vanorairwa kurodha yazvino uye inoshanda Apk faira. Izvo zvinosvikika kune vamwe vashandisi veAndroid kubva pazasi apa mahara.
Zvino tanga maitiro ekuisa uye unakirwe nemavara matsva plus maficha emahara. Kusvika panguva ino gumi makuru uye makumi mapfumbamwe mamwe mavara akasiyana anime anogona kusvikika neakasiyana kusarudzwa kwemavara. Anopfuura mazana matanhatu pamwe neakawanda angle pose anowedzerwa.
Uchishandisa mhenyu inogadzirisa, vatambi vanogona kugadzirisa zviri nyore uye kugadzirisa bvudzi, ziso uye kumwe kuisirwa zviri nyore. Zvese zvavanoda kuita kungosarudza zvikamu uye wobva wagadzirisa saizi, nzvimbo uye mavara zviri nyore. Zvimwe zvinhu zvakawanda zviripo kusarudza.
Idzo iMhuka, Zvinhu, Shamwari Hunhu uye nezvimwe. Iyo Studio modhi ichapa gumi makuru mavara akashongedzerwa nesimba rakazara uye simba. Vatambi vanobvumirwa kusarudza huwandu hwakasiyana hwemashure uye kumberi.
Kana mafeni aitwa nekuvaka hunhu uye kugadzirisa. Iye zvino vanogona kuwedzera zvinyorwa zvakasiyana mukati mebhokisi guru uye nyore kuita kuti mutambi ataure nemifananidzo yakasiyana. Saka iwe wagadzirira kunakidzwa iyi nyowani yemutambo wobva waisa Gacha Star Dhawunirodha.
Mutambo uyu wakasununguka kurodha.
Kubatanidza mutambo kunopa akawanda akakosha maficha.
Izvo zvinosanganisira akasiyana anime mavara.
Madhizaini anosanganisira Hairstyle, Ziso, Ganda Ruvara uye nezvimwe.
Tsika dzakasiyana dzinosvikikawo.
10 mavara makuru uye makumi mapfumbamwe mamwe mavara anowanikwa.
Iyo yemutambo interface iri nyore uye 2D.
Rarama customizer batsira vatambi kuvaka zviroto mavara.
Nzira yekudhawunirodha Gacha Star Game
Kunyangwe vateveri vanogona kurodha uye kuisa yazvino vhezheni yeGacha mutambo zviri pamutemo kuburikidza nePlay Store. Asi kana zvasvika pakurodha edition yazvino. Ipapo shanduro yekushandisa haisvikiki ipapo.
Saka chii chinofanira kuita Android gamers mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanise kuwana iyi yazvino edition? Saka mumamiriro ezvinhu akadai, tinokurudzira avo vatambi veAroid kushanyira webhusaiti yedu. Uye nyore kurodha iyi yazvino yakagadziridzwa vhezheni yeGacha Star App yemahara.
Iyo yakagadziridzwa vhezheni yatiri kutsigira pano haimbobvunzi mvumo isingakoshi. Kunyangwe isu takatoisa mutambo wacho pamusoro peakasiyana android smartphones. Uye mushure mekuisa mutambo isu hatigone kupupurira chero dambudziko mukati.
Pano pawebhusaiti yedu takambogovana mamwe editions ehukama. Izvo zvichiri kushanda uye zvakanaka kuisa mukati ma smartphones. Kuti uongorore mamwe edhisheni akafanana ndapota isa inotevera mitambo. Ndivo Gacha Club Edition Apk uye Gacha Kirabhu Apk.
Saka iwe uri fan hombe yeGacha uye uchitsvaga yazvino yakagadziridzwa edition. Iko zviwanikwa zvinosanganisira Maganda, Bvudzi, Customizer, Hunhu uye mhuka dzinovaraidza zvakatovhurwa kuti zvishandise. Ipapo isu tinokurudzira avo vatambi kuisa Gacha Star App Dhawunirodha.
Categories shaya hanya, Games Tags 2D Mutambo, Gacha Star, Gacha Star Apk, Gacha Star App, Gacha Star Game Post navigation
WhatsMock Pro Apk Dhawunirodha Android [Fake WhatsApp]
NOKA Apk Dhawunirodha 2022 Ye Android [Kukurukurirana Pamhepo]